Baarlamaanka UK oo markii 2aad qaadacay heshiiska ka bixitaanka EU-da • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Baarlamaanka UK oo markii 2aad qaadacay heshiiska ka bixitaanka EU-da
Baarlamaanka UK oo markii 2aad qaadacay heshiiska ka bixitaanka EU-da
March 13, 2019 - By: Hanad Askar
Golaha Wakiilada ee dalka UK oo xalay u codeeyey heshiiska ay soo diyaarisay Raysalwasaare Theresa May ee ka bixitaanka EU-da ayaa cod aqlabiyad ah ku diiday markii labaad qorshahaasi lasoo hordhigay.
Xildhibaano gaaraya 242 ayaa codka siiyey heshiiskan, halka ay cod dheer ku diideen 391 xildhibaan.
Arrintan ayaa keenaysa in xiliga loo qabtay dowlada UK inay ka baxdo Midowga Yurub ee dhamaadka bishan Maarso dib loo dhigo ama wadankaasi uu heshiis la’aan isaga baxo EU-da.
Heshiiskan ay ku kala baxayaan EU-da iyo UK ayaa loogu talo galay in lagu maareeyo nidaamka ay kuwada shaqeyn doonaan labada dhinac sida maamulida xaduudaha iyo ganacsiga, arrintaasi oo ay caqabado badan ka taagan yihiin.
Qodobada ugu muhiimsan ee la isku heysto ayaa waxa kamid ah qaabka ay noqon doonto Xaduuda Wadanka Ireland oo kamid ah EU-da iyo dhulka Waqooyiga Ireland (Nothern Ireland) oo kamid ah UK, waxayna dadka dhulkaasi ku nool oo weli taageersan EU-da diidan yihiin in la dhex dhigo xaduud.
Ms.May ayaa dadaal u gashay inay wax ka bedasho heshiiskan oo uu horey Baarlamaanka u diiday horaantii sanadkan, balse qaar kamid ah Xisbigeeda ee u badan xagjirka doonaya in laga baxo EU-da ayaa u arka heshiiskan mid awood dheeraad ah oo sharci siinaya dhinaca Midowga Yurub.
Mucaaridka oo iyagu intooda badan kasoo horjeeda gebi ahaan mashruuca ka bixitaanka EU-da ayaa dhankooda doonaya in markale afti loo qaado arrintan.
Xukuumada May ayaa maanta oo Arbaco ah horgeyn doonta Baarlamaanka mooshin la xariira in xisbiyada dalkaasi ku heshiiyaan qaabka ay u doonayaan in loo maareeyo Brexit iyo in ay kala doortaan in dib loo dhigo Brexit, in heshiis la’aan ay ka baxaan Midowga ama in Afti kale loo qaado.